China Green Chalkboard, Green Dy ihichapụ Akwụkwọ ahụaja, Igwe Ọdụdọ Green Chalkboard
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Ụdị ahịa:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Onye na-emepụta ihe:11% - 20% N'ezie:ISO9001, RoHS, Test Report Nkọwa:Green Chalkboard,Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ,Magnetik Green Chalkboard,,,
Home > Ngwaahịa > Chalkboard agba > Green Chalkboard
Ngwaahịa nke Green Chalkboard , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Green Chalkboard , Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of Magnetik Green Chalkboard R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Nnukwu Wallmụaka dị na mgbidi dị n’elu
Zụta Green Blackboard N'ihi Home
Nnukwu Vintage Green School Chalkboard maka Ọre
Nnukwu Wallmụaka dị na mgbidi dị n’elu Green Chalkboard Nkebi No.GCKP-NS50-PSA bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-adọrọ mmasị na-acha ọcha nke etinyere na mgbidi dị mma. Dị ka ụdị chalkboard na-agbanwe agbanwe na mgbakwunye dị mfe ịkpụ, gbagọrọ agbagọ, agbagọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịbanye n'ime ụdị ọ bụla ịda mba na...
Zụta Green Blackboard N'ihi Home Ihe No.GCKP-NS50 Green Chalkboard bụ ụdị chalkboard na-agbanwe agbanwe , mfe ịkpụ, gbagọrọ agbagọ, agbagọ agbagọ, agbakọ ma ọ bụ nwee ike ịbanye n'ime ụdị ọ bụla. Vingchekwa ohere ma buru ibu n'ụzọ dị mfe. Dịka chalọbọd, ọ nwere ọmarịcha ide ihe na nhichapụ nhichapụ....
Nnukwu Vintage Green School Chalkboard maka Ọre Kpochapu kpochapu Magnet Green Chalkboard Ihe NkeGGKKKK-NM50 bụ ụdị chalkboard na- agbanwe agbanwe, mfe nha, gbagọrọ agbagọ, agbagọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịbugharị n'ime ihe ọ bụla. Yabụ nke ahụ dabara adaba maka kọbọd ọ bụla. N'otu oge ahụ, ọ nwere ndọta, dị...
China Green Chalkboard Ngwa
Green na-enwe mmetụta dị nro, ọ bụ ihe kachasị mma na agba na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ị gaghị ahụ ya ka ọ na-acha. Ọ bụ ihe na-adịghị agbanwe agbanwe, mana ọbụghị ntụgharị uche, ọ dị jụụ, mana ọbụghị mgbagharị. N'ime agba niile na-egbuke egbuke, ọ bụ ezigbo onye nhazi ihe omume, na-ejikọ ụwa na mbara igwe ... Agba agba aja aja na agba ụwa, ma ọ na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ acha odo odo, nwere ike ikwekọ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị. Na acha anụnụ anụnụ dị na mbara igwe isgwakọta ya na-acha ọcha na -acha ọcha site na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ bụrụ na enweghị ntụgharị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ ga-abụ nkwarụ abụọ na-enweghị isi. Green bụ agba mara mma nke ukwuu, na-enwu gbaa ma nwee ike. Green dị ka aristocrat dị mfe, nke nwere ọkaibe na-esi ísì ụtọ si n’ubi ahụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị dị ka eze nwanyị na-eme mkpọtụ, nke nwere udo na ọnọdụ mmekọahụ, dị jụụ na nke ọma. Ya mere Green dịkwa mma dịka eji achọ akwụkwọ ahụaja mma. Ọrụ nhicha ga - eme ka ihe onye nwe ya nweta echiche niile nke imepụta mgbidi site na eserese. Ọ bụghị naanị Green Green Chalkboard s na-egbo mkpa ndị a, mana na-anabatakwa magnets n'ihi ihe ya, weta ohere ọzọ.
Magnetik Green Chalkboard
Green Chalkboard Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Magnetik Green Chalkboard